Mpanohitra : Te ho eo ambany vahohon’ny vahiny -
AccueilSongandinaMpanohitra : Te ho eo ambany vahohon’ny vahiny
Mpanohitra : Te ho eo ambany vahohon’ny vahiny
14/03/2018 admintriatra Songandina 0
Manoloana ny resaka fahafatesan’ ny omby tany Andranomanelatra tao amin’ ny orinasa AAA, dia nandray ny andraikiny ny fitondram-panjakana, ary efa niarahan’ ny rehetra nahita ny fampiantsoana ny masoivohon’ i Amerikanina teny amin’ ny minisiteran’ ny Raharaham-bahiny, antony moa dia ny fanomezan’ity farany baiko ny prefen’Antsirabe sy ny fitsarana any an-toerana. Manoloana io fanapahan-kevitra tamin’ ny fampiantsoana ny masoivoho Amerikanina io anefa, dia nahagaga ny fihetsiky ny mpanohitra sasany izay nilaza fa maha menatra, ary tsy tokony hotanterahina izany fampintsoana izany na dia efa mazava aza ny fifanarahana tany Vienne fa tsy azon’ izy ireo atao velively ny mijabaka amina raharaham-pirenena amin’ny toerana izay hiasany. Mariky ny fiandrianam-pirenena tokoa ny fihetsika izay notanterahin’ny fitondram-panjakana, satria dia misy hatrany ireo firenen-dehibe no te hitsofoka amin’ny raharam-pirenena malagasy izay tokony ho antsika manokana.
Mieritreritra ihany koa ny sasany tahaka ny Etat Unies angamba fa mbola voazanaka isika, ary raha miteny izy ireo amin’ ny maha firenen-dehibe azy ireo dia hahatahotra i Madagasikara, ary hanaraka izany. Tsy izany anefa no miseho fa nijoro ny fanjakana, ary nametraka amin’ ny toerany an’i Robert Yamate
Tsaroana ohatra ny efa zava- nisy teto amin’ ny firenena fa efa nisy ny masoivoho frantsay izay nalefa nody any aminy, noho ny tsy fanajany ny rafitra ara-diplaomatika. Io izay marihina fa ny tompon’omby izay maty tany Antsirabe mihitsy no nanao izay fihetsika izay, fihetsika izay azo lazaina fa tokony hiarahan’ny rehetra mankasitraka. Ankehitriny manoloana io fihetsiky ny Amerikanina io ihany koa dia tsy sahy niloa-bava intsony ny tompon’omby, satria mahalala tsara ny tenany fa fihetsika tsy azo tanterahina ny nataon’izy ireo. Ny mahagaga anatin’ ity raharaha ity ihany koa dia tena faly aoka izany ireo mpanohitra tamin’ ny fihetsika izay nataon’ny Amerikanina na dia fanitsakitsahana ny fiandrianam-pirenena tahaka izao aza izany, ireo mpanohitra ireo izay tena tsy menatra ihany koa ny hivarotra tanindrazana raha izao tsy amin’ ny toerana izao sahady dia efa mampiseho ny toetra ratsy. Ankilany dia mipetraka aloha ny fanontaniana eto hoe efa te hiseho lany fa manana kandida ve ny Amerikanina no manao izay fihetsika izao, satria dia lasa aloha loatra ihany izany fampahafantarana izany. Ny Malagasy rahateo izay efa mailo fa tsy hitondra soa ho an’ ny firenena mihitsy ny hisian’ ny bolokim-bazaha hitantana an’i Madagasikara, satria dia tsy misy ataon’ izy ireo raha sanatria lany hafa tsy ny fandraisana baiko. Baiko izay mampikorosy fahana sy mampiditra anaty lavaka rahateo no toloran’ny firenena mikambana, ka ny harem-pirenena no laharam-pahamehan’izy ireo.